Shirri Habashootni nurratti xaxan yoomuma nuuf gala laata? -
bilisummaa May 23, 2013	Leave a comment
Yeroo tokko tokko yoon waayee keenya gadifageenyaan ittiyaadu, balaa nutti deemaa jiru alaalatti arguu dadhabnee; hanga nubira gayutti teenyee eeguun rakkoolee dhuma hin qabneef akka nu saaxilee fi nu saaxilun hubadha. Balaa tokko alaalatti arganii ofirraa ittisuu yoo hin dandeenye; yoo nama bira gayee harkaan nama qabate, kana keessaa ofbaasuun rakkisaa ta’a. Akkuman armaan olitti tuqee dabre, Habashaatu akkana nu godhe, isaantu akkas nu godhe; Habshaatu naannoo, gandaa fi amantii dhaan akka walqoqqoodnu nu taasise; Habshaatu shira nurratti xaxee, akka mooraan keenya laafu taasise fi kkf dubbachaa ormatti quba qabuun homaa hin fidu. Wanti ofis walis gaafachuu qabnu, yoo isaan akkan nu godhan ykn nu taasisan kana maaliif shira isaaniitiif karaa baasna jennee of gaafachuun silaa gaafii duraa ta’uu qaba ture. Takka dogoggoruun uumaa ilma namaa keessa waanuma jiruu dha; garuu lammata gowwoomuun, kan dabrerraa barachuu dadhabuun dadhabbii mataa ofii ti.
Wantan har’a waayee shira Habashootaa kaaseef sababan qaba. Barreeffama mata duree “OROMO MALLI MAALI ?” jedhuun Tokkicha Abbaa Milkiitiin dhiyaate Ayyaantuu.com irratti dubbisseen ture. Barreeffamni kun barreeffama biraa mata dureen isaa “Amna Dukkanaa’aa: Seenaa Dhokataa Ilmaan Oromoo Biyya Eritrea Keessaa” jedhuun dargaggoo maqaan isaa T.F YKN Addaamuu jedhamuun dhiyaate irratti hundaaye. Waayee barreeffama duraa, kan T.F ykn Addaamuu dhaan dhiyaate sana, gara boodaa itti deebi’ee waan tokko tokko jechuun barbaada. Qabiyyeen barreeffama Obboo Abbaa Milkii garuu akka naaf galetti ykn akkan hubadhetti waan Shaabiyaatti xiyyeeffatu fakkaata. Asirratti wanta Eertiraa keessatti godhamaa ykn ta’aa jiruuf ragaa waanan hin qabneef waayeen kun dhugaa dha yookaanis dhara jechuu hin danda’u. Haa ta’u malee, wanti hubatamuu qabu tokko, har’a abbaan fedhee biyyas ta’ee mootummaan kamiiyyuu dhimma mataa isaatiif ykn bu’aa irraa argatuuf jedhee yoo ta’e malee, dhugumatti garaa qulqulluudhaan qabsoo saba Oromoo ni deeggara jedhanii irraa eeguun ofgowwoomsuu dha jedheen yaada.
Qabsoo bilisummaa Oromoo ilaalchisee, Eertiraan akka ofiif walabummaa argatetti, walabummaa Oromiyaas ni deeggarti yookanis hin barbaaddu jechuun ammaaf na rakkisa. Waan Shaabiyaan ykn Eertiraan Oromoof godhaa turte/jirtu badaas ta’ee gaarii seenaaf dhiisuudhaan, wanti hubatamuu qabu garuu, akka barreeffama lamaan sana keessatti ibsametti, TPDMs (Tigry Peoples Democratic Movement) ta’ee Shaabbiyyan maqaa Oromootiin jaarmayaa maxxannee ijaaruu yaaluun qabsoo keenyaaf baay’ee gaaga’ama guddaa akka ta’u dha. Karuma fedheenuu haa dhufuu, shirri akkanaa kun balaa guddaa nutti fiduu akka danda’u Oromoon jabeessee hubachuu qaba. Shirri akkanaa kun milkoofnaan; jaarmayaan akka OPDO deebi’aa ijaaramnaan, qabsoon keenya ammas bar-kurnee lamaa ol gara duubaatti akka deemtu shakkiin hin jiru. Kun sodaatanii nama sodaachisuu otuu hin taane balaa dorrobee jiru arguu danda’uu dha; yaaddoo ibsuu dha. Hin ta’a ykn hin ta’u; ni milkaaya ykn hin milkaayu jechuun tilmaama mataa ofii ti. Dhugaan lafarra jiru garuu dagatamuu hin qabu.
Akkuman kanaa olitti tuqee dabre, barreeffama isa duraas, kan dargaggooT.F YKN Addaamuu jedhamuun dhiyaates dubbissen ture. Yaadolee heddoominaan achirratti kennamanis argee jira. Namootni barreeffama sana karaa adda addaatiin ilaalan. Kuun waan akka asoosamaatti dhiyaate fakkeessu; kuun waan gareen Obboo Leencoofaa dhiyeessan fakkeessu; kuun ammoo waanuma dhugaadhaan argame ykn argamaa jiruu dha jedhu. Dhgaa dha, wanti tokko yoo ragaa qabatamaa wajjin hin dhiyaatne tilmaama gara graa keessa nama galchuun hin oolu. Asirratti wanti dubbistootni barreeffama kiyyaa hubachuu qaban waan dargaggoon kun barreesse dhugaa hin ta’u jechuu kiyyaa akka hin taane dha. Akkuman dursee jedhe, wanta tokko dhugaa ykn dhara ta’uu isaa kan mirkaneessu ragaa wajjin dhiyaatu dha. Dhugaa dubbachuudhaaf, anillee yeroon barreeffama sana dubbisu waayeen kun garaa na nyaatullee, karaa biraatiin yaada adda addaa keessa na galchuun hin oolle. Barreeffama sana karaa adda addaatiinan ilaale.
Egaa, kun tilmaama mataa kiyyaa ti. Wanti tokko dhugaa ykn dhara ta’uu isaa addaan baafachuun kan danda’amu yoo ragaa qabatamaan tokko jiraate dha. Karaa biraatiin ammoo, wanti akkanaa kun yoo uumamu qaamni tokko gadi bayee asirratti ibsa kennuun silaa waayee kana qulqulleessuudhaaf gaaarii ta’a ture. Garuu mee haa jennu, dhugumatti wanti dargaggoon kun barreesse yoo dhagaa ta’e; yoo dhuguma Shaabiyaan duuba jiraate ykn shira Habashootaa ta’e, hoggantootni keenya kan Asmaraa jiran waayee kanarratti ibsa kennuun isaan rakkisuu danda’a. Dhugaa dha yoo jedhan, waan iccitiin bayuuf, isaaniifuu gaaga’ama guddaa ta’a. Soba ykn dhara akka hin jenne ammoo, wanti barreeffame kun akka asoosamaattillee yoo dhiyaate, kun dhugaa jiru irratti waan hundaayuuf, dhara jedhanii sarar jala butuunis rakkisaa ta’a. Dhugaa ykn rakkoo jiru Waaqayyo/Rabbi qofaatu beeka. Kan ta’es ta’u, shirri Habashootni nurratti xaxan daangaa waan hin qabneef, ofeeggannoo guddaa barbaada. Dammaqinsaan haala keenya hubachuun baay’ee barbaachisaa fi murteessaa dha.
Tags Abdii boruu Habashaa shira
Previous Ethiopian Federal Police Assist in the Ethnic Cleansing of East Hararge Zone, Oromiya
Next The Escalation of war of Ethnic Cleansing on the Oromo People